Horumarinta codsiyada VBA ee Microstation - Geofumadas
Mee, 2010 Microstation-Bentley
Si aad u sameyso codsiyada, Microstation waxay taageertaa luqadaha kala duwan, oo ay ku jiraan Luqad Horumarinta Microstation (MDL) taas oo ay doorbidaan dhismaha Bentley. Waxay sidoo kale taageertaa aasaas aasaasiga ah ee sanado badan kahor iyo hal mar Jacaylka Java, markaa waxaa loo yaqaan 'Microstation J.'
Hase yeeshee si ay u kobciyaan raaxaysi iyo aan soo laabaneyn, waxqabadka ugu muhiimsan wuxuu ku saabsan yahay barnaamijka Visual Basic ee la yimaada barnaamijka, marka la eego XM ka hor (8.9) waxaa ka mid ah tifaftiraha guud ee Visual Basic 6.3, ugu dambeyntii wuu ka baxsan yahay.
Si aad u bilowdo
Waxaa hubaal ah in qof qaba fikrad ah kama barnaamijyada uusan haysan wax badan in la sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, qof fahamsan oop, waxaana uu la 6 Visual Basic ciyaaray, waxaad ka heli doontaa ku dhowaad dhintay qosol. Barnaamijku wuxuu sida caadiga ah u iman tusaalooyin yar, laakiin halkan, trick Waxaan arkay adiga oo isticmaalaya farsamo: Isticmaalka makrrr.
Microstation wuxuu fududeeyaa habka kaydinta hababka macruufka ah ee mvba kordhinta, markaad eegto koodhka waxaa sahlan in la bilaabo sida barnaamijku u shaqeeyo Microstation halkii aad shaati ahaan laga bilaabo xoqan. Hadda waxaan isticmaali doonaa tusaale ahaan saaxiibada Mexican, yaa toddobaadkii hore Waxay i waydiisteen caawimaad si ay u kala saaraan joqraafiyada.
Sida loo abuuro Macro.
Dheefaha> Maamulaha mashruuca.
Mashruuc cusub ayaa lagu abuuray halkan, oo la magacaabay. Waxaa badanaa lagu kaydiyaa Faylasha Barnaamijka / Bentley / Shaqada / mashaariicda / vba laakiin waxaad dooran kartaa meel kasta.
Sida loo badbaadiyo.
Si aad u bilowdo duubid, riix midabka buluugga. Barnaamijku wuxuu sii wadi doonaa wax kasta oo laga soo bilaabo markaa.
Tusaale ahaan: Ku dheji a aragtida xayawaanka, Dami dhammaan heerarka laga reebo xuduudaha tufaax iyo centroid, ka saar xiriir xuduudaha si centroids, abuuro qaababka in heerka 62 ah, dami xuduudaha, ka saar xiriir centroids in qaababka, load amarka in theming, theming sida ay waaxda taas oo tufaax leh midab gaar ah ee qayb kasta, ku rid halyeeyga.
Nidaamkan waa la joojin karaa, ama la joojin karaa sanduuqa sanduuqa cas. Haddii badhanka la cadaadiyo ciyaaro, barnaamijku wuxuu fulin doonaa jadwalka dhammeystiran sida aan u keydiyay. Faa'iidada arrintan xitaa iyada oo aan barnaamijka lahayn waa mid aad u xiiso leh haddii aad heli karto lacagta, waxaan arkay menus oo si qalad ah u sameeyey barnaamijka aan barnaamijka ahayn.
Haddii la doonayo in mar kasta oo aan ordo Juquraafi macro waa la buuxiyaa, qaybta afraadna waa la furfuray Awood-gaabin, taas oo abuuri doonta isbeddel ku jira faylka msgeo.ucf.
Sida loo beddelo xeerka.
Si aad u aragto koodhka, waxaad riixdaa badhanka furaya Visual Basic Editor.
Wax kasta waa la keydiyaa sida hal module, laakiin haddii ay dhacdo tallaabo tallaabo tallaabo ah, waxay markaas fududeysaa isdhexgalka waraaqaha. Waxaa sidoo kale lagu dari karaa ikhtiyaarka talaabo talaabo ah, taas oo u ogolaanaysa in qaybo ka mid ah sida debugger loo ordo.
Tusaale ahaan waxaan kuu muujinaya, kuwaas oo ay ka shaqeeyeen saaxiibo dheeraad ah oo ka mid ah Waqooyiga modules oo kala duwan si uu u helo xiriir si aad database ah, dil ah ligues joogtada ah, la abuuro hay'adaha lala, hirgelinta mowduuc iyo mid ka mid ah goobaha caalamiga ah. code waxay noqon kartaa password, taas oo ka hortagaysa in ay hawlwadeennada keenaan musiibo ama ay fududeeyaan kala-saarista maktabadaha fasallada aan rabno inaan la wadaagno isticmaalaha barnaamijka.
Post Previous«Previous Sidee looga xejiyaa Microstation Geographics
Post Next Imtixaanka Promark3 ... sawiro kaliyaNext »
3 Jawaab ah "Horumarinta codsiyada VBA leh Microstation"
G! 2 isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ogaaday in qaabka code loo yaqaan, sigaarka duurjoogta ah.
CreatureVectorial isagu wuxuu leeyahay:
Waxaad cabbeysaa tubaakada vector.